Chọrọ ịma ka otu ebili mmiri si wee daa? | Network Meteorology
Monica sanchez | | Ihe ikuku, Ihe gbasara ihu igwe
Cyclone Catarina, Machị 26, 2004
Otu n'ime ihe omimi nke ihu igwe nke kacha adọta uche n'ihi ike ha nwere ike nweta yana, n'ihi nke a, mmebi ọ nwere ike ibute, bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na onye isi anyị taa.
Chọrọ ịmata ihe ajọ mmiri ozuzo a bụ na otu o si adị? Aga m akọwara gị ya n'okpuru.
A cyclone bụ a gigantic eddy nke ifufe soro oké ifufe, nke nwere ike ịmepụta na mpaghara ọ bụla ebe nrụgide dị ala dị, ebe ọ bụ na ndị a bụ mpaghara ndị na-adọta ikuku site na ikuku.
Typesdị cyclones ise dị iche (ebe okpomọkụ, nke na-ekpo ọkụ, nke dị na mbara ala, nke polar na mesocyclones), nke anyị ga-egosi okpuru mmiri nke okpomoku na nke ndi polar bu ndi n’adighari iwe na akuko.
-Tropical cyclone: ọ na-etolite n’oké osimiri nke ọnọdụ okpomọkụ ya dị elu, na-ekpo ọkụ. Nke nara ike ha niile ịzụlite. A makwaara ha dị ka ajọ ifufe ma ọ bụ ajọ ifufe, ọbụnakwa dị ka oke ifufe nke ebe okpomọkụ.
Ifufe ha na-emepụta nwere ike iru ọsọ ma ọ dịkarịa ala 120km kwa awa, tinyere oké mmiri ozuzo.
-Polar cyclone: N’adịghị ka ebe okpomọkụ, ụdị ajọ ifufe a nwere oge dị mkpumkpu. Ha na-eto n'ike n'ike, nke mere na iru ike ha kachasị elu n'otu ụbọchị.
A naghị ewere ha dị ka nsogbu dị ka ajọ ifufe, mana ike ikuku a dịkwa elu.
Oké ifufe, otu n'ime nsonaazụ nke mgbawa cyclogenesis
Ihe mgbawa cyclogenesis
Mgbe a na-ekwu maka cyclones ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na anyị ga-emeso nsogbu nke ihe mgbawa cyclogenesis. Ihe omume a abụghị naanị ikpokọta oke ikuku mmiri, na-emepụta oke ikuku na ifufe nke nwere ike ibute nnukwu ihe.
Maka ọ mee, ọnọdụ okpomọkụ nke oke osimiri na nke ikuku ga-adị oke iche, nke mere na enwere nrụgide a ma ama na obere oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihe ikuku » Kedu ihe bụ oke ikuku mmiri na otu esi akpụ ya?
Nke a dị mfe, gaa n'ihu otu a, ị ga-esi ike ma sie ike karịa nke a.Biko, abum nwa oke igwe nke igwe